Dib -u -Celin: Hoos -u -dhac ku yimid sicir -barar mideysan | Maaliyadda Dhaqaalaha
Casudi casals | | Siyaasadda lacagta
Waxaan u barannay inaan maqalno ereyo dhaqaale sida sicir barar, sicir barar, hoos u dhac, iwm. Sababta aysan u badnayn in la maqlo diidmada waa sababta oo ah waa ifafaale kiciyay waxaana si aad ah loo isticmaalay. Xiritaannadu waxay keeneen xaalad xun suuqyada uu dhaqaalahoodu ku dhacay. Laga bilaabo halkan, dawladaha oo kaashanaya bangiyada dhexe, waxay bilaabeen inay si farsameysan u kiciyaan dhaqaalaha. Ifafaalahan ayaa ah waxa loo yaqaan dib -u -dhac.
Saamaynta dhaqaale ee ku -tiirsanaantu way kala duwan tahay iyadoo la eegayo duruufaha horseeday hirgelintiisa. Sababtan awgeed, kaliya ma sharxeyno waxay ku saabsan tahay, laakiin waxaan sidoo kale sharxi doonnaa sababta maanta loo hirgelinayo iyo waxa ay ku kala duwan yihiin kuwii hore. Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato saamaynta ay leedahay, sii wad akhriska!
1 Waa maxay ku -celintu?
1.1 Milicsiga maanta
2 Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan diidmada
3 Maxaan filan karnaa?
Waa maxay ku -celintu?
Dib -u -milicsigu waa xaalad ay dawladdu, iyada oo loo marayo dhiirrigelin lacageed, ujeeddadiisu tahay in la abuuro sicir -barar si looga fogaado in aad gasho hirarka leexasho. In kasta oo aysan ahayn xaaladda ugu fiican, haddana aad bay u wanaagsan tahay in qiimaha guud hoos loo dhigo iyada oo waxyeello kasta ay u keeni karto dhaqaalaha. Inaad ka baxdo isbadalku waa mid adag, maaddaama faa'iidada hoose ay shirkadaha ku riixdo inay isku helaan xaalado aad u adag. Intaa waxaa dheer, way adag tahay in dhaqaalaha dib loogu celiyo si loogu noqdo wadadii koritaanka.
Dhinaca kale, waxaan leenahay sicir barar, ugu dambayntii, sababtuna waa, hoos u dhac dhaqaale. Hoos -u -dhaca ayaa la filayaa inuu noqdo mid ku -meel -gaar ah, xitaa haddii ay jirto koror guud oo sicirrada ah, kobaca ayaa mar kale kor u kici kara. Dhab ahaantii, erayga dib -u -dejin waa isku -dhaf dhaqaale iyo sicir -barar.
Xiritaanka oo ay sabab u tahay dhibaatada hadda jirta ayaa keentay in inta badan mashiinnadii dhaqaalaha la joojiyo. Intaa ka dib, warshadihii iyo ku dhawaad ​​dhammaan qaybtii adeegga ayaa joogsatay. Taasi waxay u tarjuntay khasaare aad u weyn, dakhli la'aan, iyo ujeedka guud ee kaydinta iyadoo laga baqayo dhibaatada. Calaamadaha ugu waaweyn ee dhammaan waddammada ayaa argagaxay, maalmo yar gudahood suuqyada saamiyada ayaa hoos u dhacay heer aan hore loo arag.
Dawladaha adduunka oo dhan waxay bilaabeen inay si weyn u duraan lacag dhaqaalahooda, oo ay hormuud ka tahay USA, oo kaliya Abriil 2020 horey u lahayd 3 tiriliyan. Ujeeddada diidmadani waxay ahayd in la maalgeliyo waddammada iyada oo loo marayo iibsiga curaarta, taas oo ay dhammaantood deymaha ku kordhiyeen, iyo in gargaar la siiyo dadweynaha si looga fogaado saamaynta. Waxaa ka mid ah kuwa ugu badan Spain, ERTEs, dhinaca kale, gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhameeyay shaqo la'aanta bartamihii xabsiga, iwm. Waddan waliba wuxuu qaatay tallaabooyin maaliyadeed oo cusub. Tusaale ahaan, Faransiisku wuxuu hoos u dhigay canshuuro badan, ama kiiska Jarmalka oo 75% dakhliga soo galay la siiyay meherado ay tahay in sharcigu xiro.
Sawir laga soo qaaday Wikimedia Commons
Dhaqdhaqaaqaas oo dhan wuxuu keenay a nabadgelyo weyn oo ay dareemeen muwaadiniintu, Waxa kale oo weheliyay rabitaan ah in dib loo bilaabo "nolosha caadiga ah", isticmaalka iyo xiriirka bulsheed. Tani waxay ka dhigan tahay in qayb weyn oo dadka ka mid ah ay awoodaan badbaadi in ka badan inta caadiga ah, taasoo bilowday inay sababto a dalabka badeecadaha qaarkood oo kordhay, sida hantida maguurtada ah. Qiimaha guryuhu wuxuu bilaabay koror xoog leh celcelis ahaan dhammaan waddammada, sidoo kale tiro aad u badan oo wax laga soo iibsado qaybaha kala duwan. Maxaa ugu dambayn maanta sicirka guud ahaan wuu kordhay. Waxaas oo dhan iyada oo aan laga hadlin xiisadda tamarta ee hadda jirta oo waliba saamaysa inta badan waddamada.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan diidmada
Aragtida dhaqaalaha qadiimka ah ayaa taa taageerta sicir bararku asal ahaan waa ifafaale lacageed. Ballaarinta tirada waxaa lagu soo rogi karaa wax -soo -saarka iyo / ama keenista badeecadaha. Dhammaan wixii intaas ka badan oo lacag bixin ah ayaa laga yaabaa inayna u socon dhinaca wax -soo -saarka. Si kastaba ha noqotee, haddii wax -soo -saarka aan la hagaajin, waxay u tarjumi doontaa mid weyn kor u kaca qiimaha, maadaama ay jirto baahi ka weyn tan wax -soo -saarka. Bartaani waxay ahayd wixii dhacay wixii ka dambeeyay dhibaatada caafimaad. Maaddaama ay qasab tahay in la xiro warshadaha, waxaa weli jira dib -u -dhac ku yimaada keenista iyo buuxinta baahida jirta.
Dhab ahaantii, aad bay u badan tahay cabsida sicir -bararka iyo inaysan jirin wax soo saar ah xilliga kirismaska ​​ee soo socda oo ay dhalisay dhabar -jab. Cabsida laga qabo in dalabyada mustaqbalka aan la fulin karin ayaa ah in dib loo quudiyo loop ay mar hore adag tahay in laga baxo.
Maxaan filan karnaa?
Heerka ay kicinta maaliyadeed ay ku sii kordhineyso dhaqaalaha iyo kor u qaadista qiimaha, waxaa suuragal ah inay dhacdo in dawladuhu bilaabeen inay si tartiib tartiib ah uga noqdaan kicinta. Tani waa "duubista" la filayo. Tan, dulsaarka dulsaarka ayaa bilaabi doona inuu kor u kaco, taas oo iyana loo baahan yahay. Ciddiyaha qiimaha aad u hooseeya sida kuwa hadda haysta sicir -bararka oo sii kordhaya caafimaad ma leh. Si kastaba ha ahaatee, si lama filaan ah looma laaban karo, maadaama aan loogu talagalin inay abuurto xiisad deyn, maadaama waaxyo iyo dalal badan durba deyn badan lagu leeyahay.
Xaaladaha la isku qasay oo la isku shaandhaynayo, waxaa jira middaas sicir bararku wuxuu noqon karaa mid ku meel gaar ah. Markay dhalooyinku meesha ka baxaan, wax walba waxay ku noqon doonaan "caadi". Dhinaca kale, waxaa soo badanaya codadka sheegaya sidaas sicir -bararku wuu joogsaday, ugu yaraan muddo dheer. Bridgewater, oo ah sanduuqa maalgashiga ee uu hogaamiyo Ray Dalio, ayaa sheegay in tobankaan sano aysan u ekaan doonin 2010 marka la eego sicir bararka. Tirooyinka hadda jira waxay hadda taageerayaan aragtidan, iyagoo gaadhay sicir -barar ku yaal Maraykanka iyo Yurub oo aan la arag tan iyo 2008. Labada xilliba si isku mid ah ayaa loola dhaqmay, dhibaatada guryeynta iyo caafimaadka, oo leh ballaadhin tiro leh oo isku dayay inay ka fogaadaan dib -u -dhaca . Laakiin meeshii laga filayay muddooyinkii hore ee sicir -bararka ee aan u dhowaan meel u dhow inay ka soo muuqdaan, markan waxay u muuqatay si guud.
Adduunyadu ma aha mid toosan, oo hadda waa aragtiyo iyo dhacdooyin suurtogal ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, hadda waad garanaysaa macnaha ka -noqoshada, oo waxaad si fiican u fahmi kartaa waxa maanta dunida ka dhacaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda lacagta » Milicsiga
Waa maxay EPA
Awood wax iibsi